လေနုအေး: နင်ရယ် ငါရယ် ရောက်တတ်ရာရာ…
နင်ရယ် ငါရယ် ရောက်တတ်ရာရာ…
ပုံကို အင်တာနက်မှ ယူပါသည်။
အဲဒီတုန်းက ငါက မွန်းအောင်သီချင်း နားထောင်ရင်းလဲ မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် ကျခဲ့တာ… နင်ကတော့ ငါ့ကို ခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်ရင်း အရူးမလို့ချစ်စနိုးခေါ်ခဲ့တာ နင်မှတ်မိလား… အေး… ဟုတ်ပါရဲ့… ဂျူးရဲ့ အမှတ်တရဖတ်ပြီး တပတ်လောက် ထမင်းမစားနိုင်ဖြစ်ခဲ့သေးတာနော်… စာသင်ချိန်တွေမှာ ကျောင်းဖတ်စာအုပ်အောက်မှာ ရှားရဲ့ အချစ်ဝတ္တုလေးတွေကို ဆရာမမြင်အောင် ခိုးဖတ်ခဲ့တဲ့အထိလဲ ငါက ဆိုးခဲ့သေးရဲ့လေ… ငါ အဖေမသိအောင် ခိုးခိုးရေးတဲ့ အချစ်ကဗျာလေးတွေကို နင့်ဆီမှာ သိမ်းထားခဲ့တာ… ခုရှိသေးရင်ပြန်ပေးဟာ… ကျောင်းရှေ့ က တရုတ်စကားပွင့်တပွင့်ကို နားကြားထိုးရင်း မြက်ခင်းပြင်က ဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေနုအေးကြားထဲမှာ တော်တော်ဆိုးဝါးတဲ့အသံနဲ့ငါအမြဲဆိုခဲ့တဲ့ ‘မျက်ရည်ဝဲရုံ’ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို နင်အမြဲသည်းခံနားထောင်ပေးခဲ့တယ်နော်… ပြီးတော့ နင်က ငါ့ကို ရင်ဖွင့်တယ်… ငါကနင့်ကို ရင်ဖွင့်တယ်… ရင်ခုန်သံတွေက တခါတလေ ချိုမြလို့ … တခါတလေ ခါးသက်လို့ … အမှန်ပဲ.. တခါတလေကျတော့ ချိုသလား ခါးသလား ငါတို့စမ်းတ၀ါးဝါးဖြစ်သေးတာ…
ကြည့်စမ်း.. နင်က မှတ်မိလွန်းလိုက်တာ… ဟုတ်တယ်.. အဲဒီတုန်းက အဖြူပေါ်မှာ အနီရောင် အလုံးလေးတွေပါတဲ့ မြန်မာအကျီင်္ရင်ဖုန်းလေးကို ငါ ခဏခဏ ၀တ်ခဲ့တာ ကြိုက်လွန်းလို့ လေ… အကျီလေး အရောင်ရော့ဟောင်းနွမ်းသွားတဲ့အထိ ငါဝတ်နေတုန်းမို့နင်တောင် ပြောခဲ့သေးတာနော်… ပြီးတော့ သက်မဲ့ပစ္စည်းတွေတောင် သံယောဇဉ်ဖြတ်ဖို့ ခက်တဲ့ ငါ့ရဲ့ စွဲလန်းမှုပြဿနာကို နင်ပဲ အနားမှာနေ မေ့ပျောက်တတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တာ ကျေးဇူးပါဟာ… အခုလား… အင်း.. စွဲလန်းတတ်နေတုန်းပါပဲ… ငါ့ခြေလှမ်းတွေ မညင်သာသလောက် င့ါရင်ခုန်သံတွေက ညင်သာပျော့ပျောင်းလွန်းနေတတ်တာ နင်ကလွဲလို့သိတဲ့သူက ရှားရှားပါးပါး ပါဟာ… ငါ့စကားသံတွေက ပြတ်သားသလောက် ငါ့နှလုံးသားတွေ မပြတ်သားလိုက်ပုံများ… ငါနဲ့ ငါ အမြဲရန်ဖြစ်ရင်း ငါကပဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာလေ… ဟေး… ငါ့ကို အဲဒီလို သနားတဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့မကြည့်နဲ့ ဟာ… ငါမနေတတ်ဘူး… ငါ အသားမကျဘူး… လူအများအမြင်မှာ ငါကရဲရင့်ပြတ်သားလွန်းတဲ့မိန်းမဆိုတော့…. အားပေးမှု… ဂရုစိုက်မှုဆိုတာ ရခဲတယ်လေ… လိုရောလိုချင်လို့ လား… ဟုတ်လား… ဂရုစိုက်ခံချင်ကြတာ လူ့ သဘာဝပဲ မဟုတ်လား… နင့်မို့ ပြောတာပါ ငါ့ကို အမြဲဂရုစိုက်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရယ်…
အဖေရဲ့စည်းကမ်းတွေကြားထဲမှာ လွတ်လပ်မှုကို ဆာလောင်တဲ့ငါက ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုယ်ပေါ်များ ရပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့ ကျရင်လို့ … ကြိုတင်စီမံကိန်းတွေချခဲ့တာလေ… တကယ်တော့ ဘ၀ဆိုတာ… လွတ်လပ်မှုကို ရပြန်တော့လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချည်နှောင်မိပြန်တယ်… တခါတခါကျပြန်တော့လဲ ငယ်ငယ်ကလို လသာတဲ့ညတညမှာ အိမ်ရှေ့ ခြံထောင့်က စပယ်ရုံက စပယ်ဖူးလေးတွေကို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ရေချင်နေမိတယ်… လဘက်သုတ်တပွဲနဲ့စာအုပ်ထူထူတအုပ်ကို မေ့လျော့လို့ဟိုးအဝေးက လွင့်မျောလာတဲ့ ဂီတာသံလေးကို နားထောင်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတဲ့ညတွေ ပြန်လိုချင်တယ်… ပြီးတော့ ဆောင်းမနက်တွေမှာ အေးမြလတ်ဆတ်တဲ့လေကို ရှူရင်း စွယ်တော်ပင်တွေကြားထဲ ပျောက်ကျသွားခဲ့တဲ့ ရင်ခုန်သံတွေကို ပြန်ရှာချင်တယ်… မပြုံးနဲ့ ဟာ… ရူးရတာပျော်စရာပါ…
ဟုတ်တယ်… ငါနေချင်တဲ့ မြို့ ကလေးက မြန်မာရနံ့ တွေသင်းနေခဲ့ဖူးတဲ့ မန္တလေး… ငါငယ်ငယ်က ခဏခဏနင့်ကိုပြောဖူးခဲ့တယ်နော်… စိတ်ကူးနဲ့ ဘ၀ ကမောက်ကမဖြစ်လိုက်ပုံများ… ငါနေနေရတဲ့မြို့ က အတ္တရနံ့ တွေ သင်းနေတဲ့ သူစိမ်းတွေနေတဲ့မြို့ … ဒီလိုပါပဲဟာ… ငါချစ်တဲ့မန္တလေးမြို့ လေးလဲ မြန်မာရနံ့ တွေသင်းရာက ကင်းသထက်ကင်းလာတော့လဲ… ကြိုတင်မှန်းဆ တွက်ချက်လို့ မရတဲ့ အရာတွေကလဲ အများသားဆိုတော့… သူဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတာတွေထဲ နေသားကျဖို့ ပဲ လိုတာ မဟုတ်လား… သေချာတာကတော့ အချိန်တန်ရင် င့ါအိမ်ကို ငါပြန်ဖြစ်အောင် ပြန်မှာပါ…
ငါငယ်ငယ်က ဒုက္ခရောက်သူတွေကြား ပြေးရင်းလွှားရင်း သတင်းအမှန်တွေ ရယူတတ်တဲ့ သတင်းထောက် တယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ… လူဆိုတာ ကြီးလေအနှောင်အဖွဲ့ များလေ ပိုကြောက်လေ ထင်ပါရဲ့ဟာ… ခုကျတော့ သိပ်ကြောက်တတ်လာတဲ့ငါ ဘာလို့ များ ငယ်ငယ်က အဲဒီအလုပ်လုပ်ချင်ပါလိမ့်လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တွေးမိသေးတာ… အမေကတော့ ငါ့ကို အမြဲပြောတယ်… ညည်းငယ်ငယ်က ကြောက်တတ်တဲ့အရာတွေ အသားကုန်ကြောက်ပြီး မကြောက်တတ်ပြန်တော့လဲ လွန်လွန်းတယ်တဲ့… အေးလေ… ဟုတ်ပါရဲ့… တခါတလေ ငါအစွန်းရောက်ချက်က ပြုတ်ကျတော့ မတတ်ပဲ… ငါ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ တည်ငြိမ်သွားတော့ ကျောင်းစွဲကြီးတဲ့ငါ ကျောင်းကြီးမှာပဲ မျိုးဆက်သစ်လေးတွေ မွေးထုတ်ပေးတဲ့ ဆရာမလုပ်ချင်ပြန်ရော… ငါ သတင်းထောက်လဲ မဖြစ်ခဲ့… ဆရာမလဲ မဖြစ်ခဲ့ပါလေ…. ရည်ရွယ်ချက်တွေက အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်သလား… ခု ငါအာသီသပြင်းနေတာက တို့ တိုင်းပြည်က လိုအပ်နေသူတွေဆီ အရောက်သွားပြီး volunteer လုပ်ဖို့ … ဒီတခါရော ငါ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ ပြည့်မလား… ဟုတ်လား… မမေးပါနဲ့ ဟာ… ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ကရော… ရှေ့ သွားနောက်လိုက် ညီတတ်သလား… မှုန်ဝါးဝါးပါပဲ…
တပင်… နှစ်ပင်… ငါးပင်… ဆယ်ပင်… တော်ပြီ… မရေနဲ့ တော့… ငါ့မှာ ဆံပင်ဖြူတွေက များသထက်များလာတာ… ပြီးတော့ မလိုတဲ့အသားတွေ များသထက်များလာတာ… ပျော်သလား… ဟုတ်လား.. နင်မို့ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာမေးတတ်တယ်… ဟုတ်ပါတယ်.. ငယ်ငယ်က မလောက်လေး မလောက်စား ကလေးဆန်လွန်းတဲ့ငါ့ရုပ်ကို ငါက သိပ်ရင့်ချင်တာ… လူကြီးပုံလေးဖြစ်ချင်တာ… နင်မှတ်မိနေတယ်နော်… ဇရာဆိုတာ မဖိတ်ခေါ်လဲ ရောက်လာမှာပဲမို့သိပ်ကြီးတော့ မတုန်လှုပ်ပေမယ့် ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးတော့ မကြိုဆိုချင်တာ အမှန်ပဲ… ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ငါက ဆံပင်ဖြူတွေကို တမင်မေ့ထားပြီး ခုထိ အချစ်ဝတ္ထု...အချစ်ရုပ်ရှင်… အချစ်သီချင်းလေးတွေကို ရင်ခုန်နေတုန်းလေ…
သူငယ်ချင်းရေ… ငယ်ဘ၀နဲ့ လက်ရှိဘ၀ ဟိုခုန် ဒီကူးရင်း အဲဒီလို ရောက်တတ်ရာရာတွေ မပြောဖြစ်တာ အတော်ကြာပြီနော်… တို့ ငယ်ငယ်က စာတပုဒ်အကြောင်း ဆွေးနွေးရင်းက အတန်းထဲက ကောင်မလေးအကြောင်းရောက်… အဲဒီကနေ လောကကြီးကို အရွဲ့ တိုက်တတ်တဲ့ ဆရာတယောက် အကြောင်းရောက်.. အဲဒီကနေ ဆွဲဆောင်မှုရှိလွန်းတဲ့ ငါတို့ ကြိုက်တဲ့ မင်းသားအကြောင်းရောက်… ပြီးတော့ မိကောက်ရဲ့ကဗျာတပုဒ်အကြောင်းရောက်… နဲ့စာတပုဒ်မပြီးခဲ့တဲ့ ညတွေလိုပေ့ါနော်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်တတ်ရာရာတွေပြောဖို့ငါ့မှာ နင်ရှိနေတာကိုက ဘ၀ရဲ့ ကျေနပ်စရာတခုပဲမိုလား…
Posted by တန်ခူး at 5:00 PM
လောကမှာ ဘယ်သူမှ ဖြစ်ချစ်တာတွေ ဖြစ်ခွင့်မရကြဘူး။ ဖြစ်သင့်တာကို ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြဖို့ပါ။
အဓိက က ပျော်အောင် နေတတ်ဖို့ပါ။
အသက်ကြီးလာတာတော့ ပြောမနေနဲ့ အမရေ အချိန်ဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲ နာရီပြေးပြေးကြည့်နေမိတယ်။
love it!!! nice post!!!
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖြစ်ချင်တာတွေ နဲ့ ခုကတော့ တခြားစီပါ။ ခုထိ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ ဘာမှမလုပ်ရသေးသလိုပါပဲ တန်ခူးရယ်။